Maitiro ekudzima zvishandiso paDisney + | IPhone nhau
Maitiro ekudzima zvishandiso paDisney +
Disney + inozopedzisira yavapo kuSpain nekaralog yayo yese. Iyo sevhisi inogona kutariswa panguva imwe chete pamidziyo mina panguva imwe chete, iine muganho wemidziyo gumi pamusoro pekuti zvinyorwa zvinogona kutorwa sei. Kana iwe ukapfuura iwo muganho, unobvisa sei chishandiso kuti iwe ugokwanisa kuwedzera imwe? Tinokutsanangurira iwe.
Tarisiro yakaenzana inongoyeukwa chete apo Netflix yakauya muSpain, ichitangisa masevhisi ekuparadzira vhidhiyo kuSpain. Kuuya kweDisney + kuEurope chinhu chaicho, iine katarogu yayo yese yeDisney, Pstrong, Marvel, Star Wars uye National Geographic, pamwe nezvimwe zvakateedzana seSimpsons. Kwe € 6,99 pamwedzi (€ 69,99 Kana iwe ukasarudza mubhadharo wegore rimwe chete) isu tine bhuku rakakura kwazvo uye mukana wekuratidza iwo muhunhu kusvika ku4K pane zvishandiso zvina panguva imwe chete, iine huwandu hwakawanda hwekurodha pasi pamidziyo gumi. Izvi zvinoreva kuti hapana muganho wekumisikidza, asi kune michina yakadzora michina. Mukutaura izvi hazvifanirwe kunge zvichinetsa kune "zvakajairika" vashandisi asi avo vanogovana account yavo vanogona kusvika muganho pane imwe nguva.
Tinobvisa sei chishandiso kuti tikwanise kuisa iyo application pane imwe? Kubva pachishandiswa pachayo hapana sarudzo inoibvumira, kana kubva pawebhu peji, vazhinji vashandisi vari kupenga vachitsvaga nzira yekuzviita. Icho chiri nyore chaizvo.
Kana iwe wadhaunirodha zvemukati pane chishandiso iwe chaunoda kudzima, tanga wadzima iwo anotora
Uninstall Anwendung kubva kuti mudziyo
Kana uchinge watevera nhanho mbiri idzi, iyo nzvimbo ichasunungurwa kuitira kuti iwe ugone kuisa iyo application pane chimwe chishandiso. Zvirokwazvo vazhinji veavo vanogovana sevhisi nevamwe vanhu vanowana dambudziko iri, iro kune rimwe divi rine mhinduro yakati wandei asi iri nyore kuitisa. Nakidzwa nezviri papuratifomu uye rangarira, Gara kumba.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekudzima zvishandiso paDisney +
Nhau dzakanaka kwazvo! Ko webhu bhurawuza ichaverenga semudziyo here?
Mhoroi, ndine mubvunzo: isu tiri vanhu vashanu, mumwe nemumwe aine mbiri, tichigovana Disney + kunyoreswa. Ngatimbofungidzirai kuti yega yenhengo dzenhoroondo shanu dzakapinda mukati uye dhawunirodha uye dzakachengeta zvemukati pamawadhi maviri, zvichiita huwandu hwacho gumi. Mubvunzo ndewokuti: ko account yaisakwanisa kuwanikwa here kubva panhamba yenhamba 5? Kana kuti zvemukati zvinogona kuwanikwa uye kutariswa, asi KWETE kutorwa uye kuchengetwa pane icho chi5 mudziyo? Ndatenda!
Zvese zvinotengwa zve macOS uye iOS zvave kuwanikwa